Njigide - N'imeKildare
Njem nlegharị anya bụ isi ụlọ ọrụ yana ngalaba akụ na ụba dị mkpa na Ireland ma na-ekere òkè dị ukwuu na ntinye ego. Iji chebe ụlọ ọrụ ahụ ma mepụta ọdịnihu ga-adigide, a na-atụ aro na Into Kildare ga-emepụta atụmatụ njem nlegharị anya nke na-agụnye ọ bụghị naanị ebe obibi kamakwa na-ejikwa uto njem nlegharị anya n'ụzọ na-adịgide adịgide.
Atụmatụ atụmatụ maka njem nlegharị anya na Kildare 2022-2027 gbadoro ụkwụ na ụkpụrụ nke njem nlegharị anya na-adigide na nke na-emegharị ahụ, na-ahapụ ebe dị mma karịa ka ọ dị na mbụ.
Njem nlegharị anya na-adigide na Kildare
Iji kwalite njem nlegharị anya na-adigide dị ka ụzọ isi mepụta ọrụ, chebe akụ njem nlegharị anya na ịkwado obodo ka ukwuu.
N'ime Kildare ga-abụ bọọdụ njem nlegharị anya kachasị na Ireland dịka ndị otu ya si na njem nlegharị anya na ụlọ ọrụ ile ọbịa nọchitere anya ya.
Kọwapụta ma kwalite omume njem nlegharị anya na-adigide
Welite mmata maka njem nlegharị anya na-adigide nye ụlọ ọrụ na ndị ọbịa
Kwado nchebe nke omenala na ihe nketa okike na County
Wepụta usoro, usoro iheomume na nsonaazụ doro anya na amụma njem nlegharị anya na-adịgide adịgide wee chọpụta ka aga-esi tụọ na nyochaa ọganihu.
Kedu ka a ga-esi nweta nke a
Site n'ikwekọ na ebumnuche UN Sustainable Development Goals iji chọpụta ma mee ihe ndị akọwapụtara nke ga-enwe mmetụta dị mma na njem nlegharị anya na County Kildare, N'ime Kildare ga-eleba anya na ogidi atọ:
Akụ na ụba - uru maka azụmaahịa
Social - mmetụta na mpaghara obodo
Environment - mmepe na nchebe nke eco-nlegharị anya
Omume na ihe omume ga-enwe ihe mgbaru ọsọ dị mkpirikpi na ogologo oge na ebumnobi doro anya nke nwere ike ịlele na isi metrics n'ụzọ iji tụọ ọganihu na ịga nke ọma.
UN SDGs, nke na-elekwasị anya na ebumnuche ogologo oge, ma ga-egbo mkpa nke ogidi ndị a bụ:
10. Mbelata ahaghị nhata: ime njem nlegharị anya maka mmadụ niile
Soro ndị dị mkpa na-arụkọ ọrụ iji gbaa saịtị ndị ọbịa ume ka ọ bụrụ ndị ọbịa nwere obere ngagharị, ịhụ ụzọ, ịnụ ihe wdg.
Nkwalite ihe omume efu / ọnụ ala maka ndị ọbịa / ndị obodo ịnweta
11. Obodo na-adigide na obodo: ichekwa akụ omenala na ihe nketa
Kwalite ozi iji jiri mpaghara, site n'ịkwado azụmahịa Kildare nke a na-akwado akụ na ụba mpaghara
Kwado mmepe nke ngwaahịa njem nlegharị anya ọhụrụ na nke dị na-achọ ichekwa omenala na ihe nketa okike
15: Ndụ n'ala: chekwaa ma chekwaa ihe dị iche iche dị ndụ
Kwalite mmepe nke ụzọ ije ije na ịgba ígwè dị ka Greenways & Blueways na-emetụta mkpebi iji hụ na ha bụ ngwaahịa na-adigide.
Gbaa ndị ọbịa ume ka ha gaa na mpaghara zuru oke wee kwalite oge oke na oge ubu iji zere 'karịa njem nlegharị anya'
N'ime Kildare Green Oak Leaf
N'ime Kildare Green Oak bụ atụmatụ nke chọrọ ịkwalite omume na-adigide na njem nlegharị anya na azụmahịa ile ọbịa na Kildare. Akwụkwọ Green Oak anyị chọrọ iwulite na omume kacha mma nke mba ụwa wee hụ na anyị niile na-arụ ọrụ nke ọma.
Ka anyị mee Kildare ọnụ ebe njem nlegharị anya ndụ ndụ!
Nke a bụ ndepụta nke ndị na-eweta ihe nlegharị anya na-adigide na Kildare bụ ndị nwere n'ime Kildare Green Oak Leaf:
Ogige Ihe Nketa Lullymore
Ụgbọala m ma ọ bụ Hike m
Irish National Stud & Ubi
Kedu otu ị ga-esi tinye aka na atụmatụ Green Oak anyị?
Ọ bụrụ na ị nwetalarị akara eco-labelụ sitere na ụlọ ọrụ na-adigide, (Green Hospitality and Sustainable Travel Ireland bụ ụfọdụ ọmụmaatụ!) ị tozurula ịnata nzere Kildare Green Oak Leaf na ndetu gị intokildare.ie. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị isonye mana ị maghị na ị tozuru oke biko kpọtụrụ anyị anyị ga-arụkọ ọrụ ọnụ na #MakeKildareGreen
Otu esi banye Kildare Green Oak na-arụ ọrụ
Ozugbo ị nwetara kọntaktị iji mee ka anyị mara na azụmahịa gị na-arụ ọrụ nke ọma, anyị ga-agbakwunye mkpado enyi na enyi na ndepụta gị, ọ dị mfe.
Uru nke Into Kildare Green Oak initiative
Ị maara na 78% nke ndị mmadụ nwere ike ịzụta ngwaahịa a na-akpọ nke ọma dị ka enyi na enyi gburugburu ebe obibi (Nnyocha GreenPrint, Maachị 2021)? Ka anyị rụkọọ ọrụ ọnụ gosi ndị ọbịa anyị na anyị bụ ebe ahịhịa ndụ. Atumatu a ga-agụnye nnabata na webụsaịtị anyị dị ka ekwuru n'elu yana ụfọdụ ọzụzụ na onyinye iji mata mbọ gị, echiche gbasara otu anyị nwere ike isi meziwanye omume nkwado anyị dị ka mpaghara na atụmatụ mmemme anyị nwere ike soro ọnụ. Anyị ga-ekekọrịta njem gị na Kildare Green Oak na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta anyị iji gosi ndị ọbịa gị mbọ enyi na enyi gị!
Ọmụmaatụ ụfọdụ eco – omume enyi
Gosi njikọ ụgbọ njem ọha na ntuziaka iji gbaa ndị ọbịa ume iji ha na webụsaịtị gị
Jiri ngwa ahịa sitere na mpaghara wee jikọọ na azụmaahịa dị nso iji mee ka njem ndị ọbịa na mpaghara gị dị ogologo
Nkewa mkpofu – hụ na ị na-emegharịgharị ihe, na-ekewa iko na-emebi ihe mkpofu nri
Ike - gbanyụọ ọkụ na akụrụngwa mgbe ha anaghị eji
Nwalee ụfọdụ ngwaahịa na-enweghị plastik
Ewebata ụfọdụ efere sitere na osisi na menu gị
Kụọ ubi ifuru ọhịa
N'elu bụ ụfọdụ ihe atụ nke otu anyị nwere ike isi mee obere mgbanwe na azụmahịa anyị iji mee nnukwu mgbanwe n'ụwa.
Nkwenye na-adịgide adịgide nke Into Kildare kwadoro:
Njem Ireland na-adịgide adịgide
Dejupụta fọm dị n'okpuru wee tinye aka!
Anyị chọrọ inyere azụmahịa gị aka inwe ọganihu na ụlọ ọrụ njem nlegharị anya na asọmpi. Ọ bụrụ na azụmaahịa gị na -enye ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ dabara na ụlọ ọrụ njem ma ọ bụ na ịchọrọ inyocha uru azụmahịa gị bara, banye na Kildare.